Date My Pet » 5 Zvikonzero nei Dates Breakfast First Uri Brilliant
Vari pasi kumanikidzwa:
Kuonana mangwanani zvinoreva kuti zvinotarisirwa kuti "kukomba" musi inogona kuva shoma sezvinobvira kumativi ose. Kunenge kuti vasingatsigiri uchava kunzwa ndanyanyokwidziridzwa kusagadzikana kana vanongofunga vanoziva vari Inotubuka, chisvusvuro-pfungwa resitorendi, sezvo chaizvo chiitiko chisvusvuro ndiye rakagara richidudzirwa ari pasi anokosha mashandiro. zvisinei, kusiyana chete misangano nokuti kofi, chisvusvuro misi nenzira default kupa zvakawanda akavaka-mune mikana yokuita kuziva quirks vemamwe munhu. Nokudzidza vangava kufanana sosi mazai avo vanonzwa sei pamusoro Pancakes Vs waffles, chisvusvuro misi zvinopa nyore "enda-kuti" kukurukurirana nyaya apo kana unogona kufunga zvokutaura.
Hapana kutarisira chinhu kuitika pashure
Kana zviri kushamisika kana pachava kukokwa wako zuva kuti furati kana usiku kunze kusora muguta pamwe chete, chisvusvuro misi kazhinji pamwe kusava nechokwadi nezvokuti sei / kana chaizvo usiku achaguma. With chisvusvuro mazuva, pane rimwe divi, yokupedzisira kunogona nokururamisira nyore kwerubwinyo rwakagara rwuripo aronga. Saizvozvo, yaigona kunyange kuva chikamu rakamiswa kutanga musi nguva. Semuyenzaniso, nezvokungoshanyirawo chisvusvuro musi panguva 9am zvingashandawo pamwe okurerutsa, "Ndine gorofu mutambo akaronga kuti 11;"Iyi nzira, vaviri muri zuva rako vari-the-kuziva rini musi richagara. Uyezve, kukurukura nomumwe zvawakarongera vamwe zuva unogona kuva mumwe nyore "enda-kuti 'nyaya kukurukurirana paunenge chomp pasi mabhisikiti uye girevhi.
Vane nyore nhamba-panze yemapfekero ane
Kusarudza munhu hembe kuti zuva rokutanga kunogona yekudyidzana zvikuru tsinga-wracking pane kusarudza zvinhu wenguvo yenyu yebasa. waitwa pakutanga vari hapana mubvunzo unokosha, asi yokuzvifungidzira panze sei dressy kana kungoita unofanira kuva kufambidzana kuororwa kazhinji kukonzera kunetseka pasingadiwi kuti mapato ose vanobatanidzwa. With chisvusvuro, zvisinei, kupfeka kumusoro nezvo ndiye anenge zvirokwazvo kunze mubvunzo. Nepo kuratidza munzvimbo sweats uye t-shirt zvichida hapana zano rakanaka kana, chisvusvuro misi vachiri pedyo default sheedzera munhu akadekara, shaya hanya (asi taridzika) yemapfekero.
Vanogona kuva nekaupenyu chipa
Kusiyana chisvusvuro musi apo bhiri anogona achitambanudza kubva appetizers kuti zvinwiwa kuti entrees kuti zvokuseredzera, chisvusvuro misi vari anenge anosimbiswa kuva vakanaka nekaupenyu inokwanisika yairatidzwa dzakawanda. chokwadi, wedzera-wanda kuti rugwaro zvingasanganisira achirayira kofi kana orenji muto kana vanosarudza kurutivi chibereko Salad panzvimbo hashi naHanzvadzi Brown, asi uchitikurudzira, chisvusvuro misi runako nyore kufungidzira mutengo. Uyu bhonasi miviri imi kwenyu zuva: hamungambovi kuenda akaputsa mumwe anogona zvakaipa rokutanga musi, uye iye / iye haazorambi ungonzwa iwe kupedza chikuru zvikuru chiri Nemutengo kusangana naye / her.
Havachina chii Champions kuita ...
OK, saka uyu angava zvishoma mumwe Stretch, asi tsvakurudzo kunoratidza kuti kudya zvokudya zvemangwanani utano nguva dzose chiitiko inobatanidzwa nani kunopindirana utano uye yakawedzerwa mukana wokuva anokwanisa kusvika uremu zvinangwa. Saizvozvo, mumwe "yakanakisisa yokutenda" munhu achifanira rakatanga musi abudirire uremu rwendo kudya kwamangwanani ose zuva. Izvi imhaka yokuti pokudya haasi chete chinonaka nzira kutanga zuva rako, asi zviri uyewo akatisiyira nzira zvibayo-kutanga kugayiwa kwezvokudya enyu yaro usiku achitsanya muoti. Zvichitaurwa zviri nyore, kukoka musi wako zvemangwanani iguru nzira kutaura, "Aaa, Ndiri munhu ane hanya utano hwangu, uye ini chete kuti hanya Iwewo!"